LENOVO က G780 များအတွက်ယာဉ်မောင်း DOWNLOAD - မောင်းသူ - 2019
Laptop ကို Lenovo က G780 များအတွက်ယာဉ်မောင်း Download
အရံပစ္စည်းသို့မဟုတ်လျှပ်စစ်ဓါတ်အားများပြတ်တောက် "အမွမ်းပုံ" ပုံရဲ့အလယ်ပိုင်းသောအဘို့ကိုအပေါ်ကိုကြည့်ရှုသူများအာရုံစိုက်ဖို့အနုပညာရှင်တွေလျှောက်လွှာတင်ခဲ့တယ်။ ဒါဟာ Vignette မှောင်မိုက်ဒါပေမယ့်လည်းအလင်းနှင့်မှုန်ဝါးမသာဖြစ်နိုင်သည်ကိုသတိပြုသင့်ပေသည်။
ဤသင်ခန်းစာတွင်, ရဲ့မှောင်မိုက် Vignette နဲ့ပတ်သက်တဲ့အထူးသစကားပြောရန်နဲ့ကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေမှာသူတို့ကိုဖန်တီးဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူကြကုန်အံ့။
ဒီသင်ခန်းစာဓါတ်ပုံကို birchwood ရွေးကောက်တော်မူခြင်းနှင့်တစ်ဦးမိတ္တူအရင်းအမြစ်အလွှာ (ကိုဖန်ဆင်းခဲ့သည်CTRL + J ကို).
Method ကို 1: ကို manually ကို
နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်အမျှဒီနည်းလမ်းကိုကိုယ်တိုင်ဝစွာနှင့်မျက်နှာဖုံးကို အသုံးပြု. Vignette ကိုပါဝငျသညျ။
အဆိုပါ Vignette အသစ်တစ်ခုအလွှာကိုဖန်တီးပါ။
သော့ကိုပေါင်းစပ်နှိပ်ပါ SHIFT + F5အဆိုပါဝစွာ settings ကိုပြတင်းပေါက်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီပြတင်းပေါက်မှာဝစွာအရောင်နဲ့အနက်ရောင်စာနယ်ဇင်းကို select OK ကို.
Next ကို, သင်က tool ကိုယူရန်လိုအပ်ပါတယ် "Brush".
ကို select လုပ်ပါပတ်ပတ်လည်ဖွဲ့စည်းရန်, ဖြီးပျော့ဖြစ်သင့်သည်။
brush အရောင် - အနက်ရောင်။
စတုရန်းလေးထောင့ကွင်းခတ်ထဲမှာဖြီး၏အရွယ်အစားကိုတိုးပှား။ ပုံ၏ဗဟိုအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖွင့်လှစ်ရန်အဖြစ်ဖြီးအရွယ်အစားထိုကဲ့သို့သောဖြစ်သင့်သည်။ ကျနော်တို့ကပတ္တူကို click အနည်းငယ်ကြိမ်။
တစ်ဦးလက်ခံနိုင်ဖွယ်တန်ဖိုးအပေါ်ဆုံးအလွှာ၏ opacity ကိုလျှော့ချပေးပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှု၌, 40% သင့်လျော်သည်။
Method ကို 2: Feather အထီးကျန်မှုတွေ
သတ္တုများပုံသွန်းခြင်းဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်ငှက်မွှေးဘဲဥပုံဒေသ အသုံးပြု. ဤနည်းလမ်းကို။ ကျနော်တို့အသစ်တခုအလွတ်အလွှာအပေါ်တစ်ဦး Vignette ဆွဲမေ့မထားပါနဲ့။
1. ကို Select လုပ်ပါ tool ကို "Elliptical Marquee".
ကျနော်တို့ကပုံရိပ်၏ဗဟိုနှင့်အနားမဟုတ်ပါဘူးအနက်ရောင်အရောင်နှင့်အတူဖြည့်ရန်လိုအပ်မည်အဖြစ် 3. ဒီရွေးချယ်မှု, inverted ရန်လိုအပ်ပါသည်။ ဒါကသော့ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့်ပြု CTRL + SHIFT + I ကို.
4. အခု key combination ကိုနှိပ် SHIFT + F6ရိပ် settings ကိုပြတင်းပေါက်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ တန်ဖိုးအကွာအဝေးကျနော်တို့ကအကြီးဖြစ်ရပါမည်သာပြောနိုင်, တစ်ဦးချင်းစီကိုရှေးခယျြဖြစ်ပါတယ်။
5. (ရွေးချယ်ရေးအနက်ရောင်ဖြည့်ပါSHIFT + F5, က Black) ။
6. ရွေးချယ်မှုမှဖြုတ်ပါ (CTRL + D ကို) ထို Vignette ၏ opacity ကိုလျှော့ချပေးပါတယ်။
Method ကို 3: Gaussian Blur သ
ရမှတ် (အသစ်အလွှာဘဲဥပုံရွေးချယ်မှု, inverting) စတင်ထပ်ကိုစတင်ရန်။ (feathering မပါဘဲအနက်ရောင်နှင့်အတူကဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့် deselectCTRL + D ကို).
1. menu ကိုသွားပါ "Filter ကို - Blur - Gaussian Blur သ".
2. Slider ကချိန်ညှိ Vignette မှုန်ဝါး။ ကြီးမားလွန်းတဲ့အချင်းဝက်ပုံရဲ့အလယ်ဗဟိုမိုက်နိုင်သည်ကိုသတိပြုပါ။ အဆိုပါမှုန်ဝါးပြီးနောက်ကျွန်ုပ်တို့သည်အလွှာရဲ့ opacity ကိုလျော့ချကြောင်းမေ့လျော့တော်မဒါအရမ်းစိတ်အားထက်သန်ကြပါဘူး။
3. opacity ကိုအလွှာကိုလျှော့ချပါ။
Method ကို 4: ပုံပျက်ဆုံးမခြင်း filter ကို
1. menu ကိုသွားပါ "Filter ကို - မှန်ဘီလူးပြင်ဆင်ခြင်း".
2. tab ကိုသွားပြီး "အကောက်ခွန်" နှင့်သက်ဆိုင်ရာပိတ်ပင်တားဆီးမှုအတွက် Vignette configure ။
ဤသည် filter ကိုသာတက်ကြွစွာအလွှာရန်လျှောက်ထားသည်။
ယနေ့တွင်သင်သည် Photoshop မှာအနား (Vignette) ရက်နေ့တွင်ရိပ်ကိုဖန်တီးရန်လေးနည်းလမ်းတွေသိလိုက်ရတယ်။ အများဆုံးအဆင်ပြေပြေနဲ့တိကျတဲ့အခြေအနေသင့်လျော်သောကိုရွေးချယ်ပါ။